Itemplate yesiseko sesivumelwano sabayili begraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imvumelwano esisiseko yemodeli yabayili bemizobo
Oosomashishini abathathu abasebenza namaxwebhu e-ofisini
Ikhontrakthi yengqesho luxwebhu olubaluleke kakhulu kuba iseka amagatya ngokunjalo iimeko apho umsebenzi uyakwenziwa khona Ngowuphi umvuzo Ukuba uyinxalenye yabasebenzi kwicandelo lethu, kuyakubanomdla kwaye kube luncedo kuwe ukuba ube nesalathiso esicacileyo kolu xwebhu.
Nantsi itemplate ebonisa kakuhle ukuba olu xwebhu lwenziwe njani ngokusemthethweni kwaye yeyiphi idatha ekufuneka ivele ngaphakathi kuyo. Imodeli yesiko eya kwenziwa ngusomashishini kuyilo loyilo loyilo olunye okanye nangaphezulu ezihlangabezana neempawu ezithile. Olu lwalamano lusemthethweni luyahambelana Ukuqeshisa okanye ukubonelela ngeenkonzo.
1. Ukutyikitywa kwesi siVumelwano, kuze emva koko kubuyiselwe kuMyili, kuya kuthetha ukwamkelwa kwaso kwaye kuya kuthetha nomyalelo wokuqalisa koMyili ekuvunyelwene ngawo. Ke ngoko, ukurhoxiswa okulandelayo komyalelo wokwenza uyilo ekuvunyelwene ngalo kuya kubandakanya ukuhlawulwa kwemali yomsebenzi owenziweyo kude kube ngumhla wokurhoxiswa.
2. UMyili uyavuma ukwenza uyilo ekuvunyelwene ngalo noMxumi, ngokungqinelana nezibonelelo zale Khontrakthi, aze aluzise kwisithuba sexesha ekuvunyelwene ngalo, eqala ekufumaneni lonke ulwazi namaxwebhu ayimfuneko ekuphunyezweni koyilo olukhankanywe ngasentla.
3. UMxhasi uthembisa ukunika ulwazi maxa onke ulwazi namaxwebhu acelwe nguMyili ukuze aphuhlise uMyilo ngokukuko kwaye agunyazise […] nge-DNI / NIF […], ukuze egameni lakhe, egameni lakhe, ukuququzelela ulwazi oluyimfuneko okanye amaxwebhu kwaye unike imiyalelo oyibona ifanelekile kuMyili ukuba enze uMyili.
4. Uhlahlo-lwabiwo mali oluqhotyoshelwe kwesi Sivumelwano luya kuba semthethweni kangangenyanga […] ukusukela kunxibelelwano ukuya kuMthengi. Nje ukuba eli xesha lidlulile ngenxa yezizathu ezingaphaya kolawulo loMyili, okanye ngenxa yoMthengi, uMyili unakho ukuphonononga uhlahlo-lwabiwo mali, enze elitsha, eliza kongeza ukwanda okunokubangela, kodwa kugcinwe iindlela zovavanyo ezifanayo ezisetyenzisiweyo Uhlahlo-lwabiwo mali lokuqala. Kwimeko apho uMthengi engalwamkeli uhlahlo-lwabiwo mali olutsha, uMyili unokuliphelisa ikhontrakthi kwaye uMthengi uya kunyanzeleka ukuba ahlawule isixa seendleko ezenziweyo kunye nomsebenzi owenziweyo ukuza kuthi ga ngelo xesha, elokugqibela lonyusa ixabiso lalo ngo-10 %.
5. Uhlahlo-lwabiwo mali alubandakanyi nawuphi na umsebenzi owongezelelweyo onokuthi uvele kwiinguqulelo zoqhelaniso kumalungiselelo alo nguMxumi. Ngenxa yoko, naluphi na utshintsho kumxholo walo myalelo lunokuthetha ukuphononongwa kohlahlo-lwabiwo mali nguMyili, enze entsha apho aya kongeza ukwanda kwemali eyenzekileyo okanye enokuthi iveliswe, kodwa igcine iikhrayitheriya ezifanayo. esetyenziswe kuqikelelo lokuqala. Ukuba uMthengi akawamkeli uqikelelo olutsha, uMyili unokuyiphelisa ikhontrakthi kwaye uMthengi kuya kufuneka ahlawule zonke iindleko ezihlawulwe nguMyili kunye nomsebenzi owenziweyo ukuza kuthi ga ngelo xesha, ukwandisa okokugqibela nge-10%.
6. Ukuba ngenxa yaso nasiphi na isizathu esingaphaya kolawulo loMyili akunakwenzeka ukuba siqhubeke noYilo, esi Sivumelwano siza kupheliswa, kwaye iKlayenti iya kuzibhatala iindleko ezenziweyo kunye nemali yomsebenzi owenziweyo ukuza kuthi ga ngoku. Ukuba ukungabinakwenzeka kokuqhubeka kungenxa yayo nayiphi na into ebangelwe nguMyili ngokwakhe, ikhontrakthi iya kupheliswa, kwaye iKlayenti iyavuma ukuhlawula iindleko ezenziweyo kunye nenani lomsebenzi owenziweyo ukuza kuthi ga ngelo xesha kodwa ngokuncitshiswa isixa sokugqibela se-10%.
7. UMyili uzibophelela ekubeni anganiki naluphi na uhlobo lolwazi kubantu besithathu malunga noYilo, ngaphandle kolwazi ekufuneka alunike uMyili kwabo asebenza nabo. Kwelinye icala, uMthengi uthembisa ukugcina imfihlo kwaye angaboneleli mntu wesithathu ngalo naluphi na uhlobo lolwazi kuyilo, de kube lixabiso ekuvunyelwene ngalo.
8. Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela ngokubhaliweyo, uMyili uya kubamba ubunini bepropathi yemizi-mveliso eyiliweyo, abela amalungelo okuxhaphaza, kodwa hayi ubunini, bezoYilo ezenziwe phantsi kwesi Sivumelwano kangangesithuba seminyaka emihlanu (5) ukusukela ekuhanjisweni kweziketshi kunye nemvelaphi yoyilo, efuna ukuba kugqithiselwe kwiqela lesithathu lamalungelo okuxhaphaza kwemvume ebhaliweyo yoMyili.
9. UMxhasi uthembisa ngokusebenzisana kangangoko anako noMyili ukuqinisekisa ukuba ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda egcinwe kuYilo iyahlonitshwa.
10. Igama loMyili kufuneka livele kwindawo ebonakalayo neyakhethwayo, kuzo zonke iindidi zokwazisa kunye nenkxaso yoYilo. Ngale ndlela, uMyili uya kubonelela uMthengi ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze kubonakale ukubonakala kwakhe njengombhali womsebenzi.
11. Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela ngokubhaliweyo, imizobo kunye nemvelaphi yoyilo yipropathi yoMyili kwaye iya kubuyiselwa yakuba isetyenziselwe oko kwenziweyo. Ezo sketski kunye neemvelaphi ezingamkelekanga kuMthengi ziya kubuyiselwa kuMyili, kunye noMthengi acinge iindleko ezivela kwintetho yabo.
12. Uyilo oluthiwe thaca kwaye olungamkelekanga kuMxumi, luquka ukukhululwa kwalo naliphi na ilungelo elinokugcinwa phezu kwabo, lisale lisezandleni zoMyili, ongumbhali wabo, onokuthi alinike usetyenziso alunqwenelayo okanye alwenzileyo elula ngakumbi.
13. UMthengi uthembisa ukuphatha uMyili olungiselelwe nguMyili, nokuba uyilo okanye owokugqibela, ngentlonipho yonke, ezinyanzela ukuba angawophuli okanye awonakalise, kwaye ukuba kunjalo, kuya kufuneka aphendule ngomonakalo owenzekileyo Yenza uMyili.
14. Umthengi uyalwamkela uxanduva lokujonga kwakhona uyilo ngaphambi kokuba aqalise nayiphi na inkqubo yokwenziwa kwakhona, ukusetyenziswa, ukusasazwa okanye ukushicilelwa, kwaye akhulule uMyili kulo naluphina uxanduva lweempazamo okanye iziphene ezinokuthi zenzeke kuyilo kwaye ezingezizo yebango phambi kwale nkqubo ikhankanywe ngentla.
15. Olu hlahlo lwabiwo-mali alubandakanyi irhafu okanye irhafu evela kulo msebenzi, oya kuthi, nakweyiphi na imeko, uhlawulwe nguMthengi.
16. UMyili unokugcina ubuncinci beekopi ezine (4) zoYilo eziziswe kuMthengi simahla kwaye angazisebenzisa njengomboniso, ukwazisa okanye ukukhuthaza ubuqu, ngaphandle kwemfuneko yokunxibelelana kwangaphambili noMthengi.
17. Abatyikityo bangenisa, nakowuphi na umangalelwano onokuthi uvele kwesi Sivumelwano, kulawulo lweeNkundla kunye nezeNkundla zesixeko […], bephakamisa igunya labo ukuba banalo.
18. Imiqathango yokuhlawula: Umxumi uyavuma ukuhlawula umrhumo walo msebenzi ukugqitywa (okanye ngaphambili ukuba bekuvunyelwene) phantsi kwale miqathango ilandelayo:  Imali  yokutshintshela iBhanki ([…]% isaphulelo). Ubungqina bokwamkelwa kwesi Sivumelwano, abaniki-zinkonzo batyikitya, kwindawo kunye nomhla oboniswe kuhlahlo-lwabiwo mali. Umxhasi  Umyili  Jonga  Ekupheleni komsebenzi  Umiselwe elinye ixesha kwi […] ntsuku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imvumelwano esisiseko yemodeli yabayili bemizobo
Ulwazi olumangalisayo. Enkosi ngokuthumela.
+ 30 Imibono ebonakalayo eya kukwenza uyithandabuze yonke into oyibonayo
Iimpawu zombala kunye neetshathi zokuguqula umbala